Akhri: Imaaraadka Carabta oo rabta hanashada maskaxda Ilaalada Villa Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com:Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku guda jirta dedaal xoogan oo ay ku hananeyso maskaxda Ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo markii saddexaad dalkeeda u qaaday qaar ka mid ah ilaaladaas, si halkaas loogu soo tababaro.
Dufcadii saddexaad ee ka tirsan ciidamada gaarka ah ee ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya ayaa loo qaaday tababar ay ku soo qaadan doonaan dalka isu-tagga Imaaraadka Carabta, kaasi oo ah mid heerkiisu uu sareeyo, sidaa waxaa yiri Cabdi Maxamed Axmed Agaasime kuxgeenka Madaxtooyada.
Cabdi Maxamed oo ka mida ahaa madaxdii sagootinaysay ciidankan ayaa warfidiyeenka u sheegay inay ciidankan ay yihiin qaybtii saddexaad, iyadoona ay horey u baxeen labo duufcadood oo isugu jira rag iyo dumar oo marba qaar si gaara loo soo tababaray.
Agaasime ku-xgeenka Madaxtooyada, Cabdi Maxamed Axmed ayaa sheegay inay ciidamadan tababarkan ku soo qaadan doonaan wadanka Imaaradka Carabta, waxaana uu intaas ku daray in la soo bari doono qaabka loo difaaco Madaxda sare iyo ilaalinta dadka muhiimka ah.
Safiirka Imaaraadka Carbta u fadhiya Soomaaliya, Mohamed Ahmed Al-othman ayaa dalka ka wado dhaqdhaqaaq aan caadi aheyn, wuxuu isu dhaafaa marka laga tago Muqdisho oo xarrun u ah magaalooyinka Garowe, Hargeysa iyo Kismaayo oo uu todobaadkaan tegay.
Safaaradda Imaaradka Carabta iyo hay’adda Bisha Cas ee dalkaas ee Muqdisho ayaa isku barbar wada labo mucaawino oo midna la siinayo dowladda Soomaaliya iyo maamullada dalka, midda kalana la siinayo dadka baahan ama barakacayaasha ah.
Mucaawinadaas ayaa loo arkaa mid laga leeyahay ujeedooyin badan, oo ay ugu horreyso maseyr Imaaraadku ka maseyray dalka Turkiga oo Soomaaliya u furay erdo badan wixii ka dambeeyey sanadkii 2011, xilligaasoo qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya ay abaari ku dhufatay.
Turkiga ayaa si weyn xilligaas ugu soo gurmaday Soomaaliya, waxaana 19-08-2011 Muqdisho soo gaaray R/wasaarihii dalkaas Mr. Recep Dayib Erdogan, xilligaas ma jirin mas’uul hoose oo Imaaraad ah oo kusoo dhiiran karay Muqdisho.
Waxaa sidoo kale loo arkaa in Imaaraadku ka careysan yahay kaalinta ay siyaasadda Soomaaliya ka ciyaarayaan Xarkada Al-islaax, taasoo ah Laanta Al-akhwanul-Musliliin, Ururkaas oo Boqorrada Imaaraadka Carabtu necebyihiin.
Al-akhwanul-Muslimiin ayaa la sheegaa iney naas nuujin ka hetsyaan dalalka Qatar iyo Turkiga, waxeyna aad ugu xoogan yihiin dalka Masar oo xitaa ay doorasho xor ah ku noqdeen madaxweynaha dalkaas, basle la afgembiyey oo Dr. Mursi uu weli xabsi ugu jiro milateriga Masar oo taageero maaliyadeed ka helaya dalka Carab ah oo Imaaraadku ka mid yahay.
Turkiga ayaa la sheegay inuu wato qorshe uu xiriir ganacsi oo baaxad leh kula yeelanayo qaaradda Afrika, isagoo doonaya inuu Soomaaliya ka dhigo albaabka oo kazoo galo Afrika, maadaama ay leedahay xeeb dheer oo laga sameyn karo dekedo badan.
Horaantii bishii June 2014, waxaa Muqdisho yimid 4 markab dagaal oo ay dowladda Turkigu leedahay, mid ka mid ah ayaa waxaa la geeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’isul Wasaare C/weli Sheekh Axmed Maxamed iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumadda.
Saraakiisha Turkiga ah ee la socday maraakibtaas ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay socdaalkooda, iyagoo sheegay in socdaalkooda uu qeyb ka yahay safar ay ku marayaan wadamada Afrika ee xeebaha leh, taas ayaana muujineysa hamiga uu Turkigu ka leeyahay Afrika.
Arrintaas Turkigu doonayo ayaa waxaa dhibsaday dalka Imaaraadka Carabta oo uu ku yaalla Suuqa ugu weyn ee bariga dhexe, suuqaas waxaa badeecooyin aan la koobi Karin ka qaata Afrika, hadii suuqaas mid la mid ah la keeno Soomaaliyana Afrikaan badan ayaa usoo wareegi kara, waa arrinta dhibeysa Isutaga Imaaradka Carabta.
Haddaba waxaa muuqata in Imaaraadku Soomaaliya ka wadaan howlo baaxd leh, waxey dowladda siiyeen gaadiid dagaal, qalab ciidan, waxey dhiseen xero ciidan, isbitaal yar, xarrumo maamul iyo saldhigyo boolis oo aan waaweyneyn, waxey marayaan markii 3-aad oo ay tababarayaan ilaalada madaxtooyada, waxey qeybiyaan timir la siinayo dadka saboolka ah, laakiin shaki badan ayaa ka jira niyadda ay ku dhiibayaan waxaas oo dhan?
Safiirka Imaaraadka Carabta, Mohamed Ahmed Al-othman ayaa qaba iney maalkaas oo dhan ay Soomaaliya usiinayaan sidii dalkaani u gaari lahaa horumar, oo aysan ka laheyn dano kale oo gaar ah.
Trukiga oo ah dalka 1-aad ee uu Imaaraadku loolanka kula jiro ayaa isagu qabtay waxyaabo sii jiri kara, waxaa ka mid ah dhismaha wadooyin badan oo ku yaalla Muqdisho, dhismaha Isbitaalkii weynaa ee Dikfeer, dhismaha Iskuulo waaweyn bilaash ah oo agoonta wax lagu baro ayna jiiftaan, dib u dhis ay ku wadaan garoonka diyaaradaha Muqdisho, diyaaradda Turkish Airlines oo Soomaalida u kala daabusha Yurub iyo Soomaaliya iyo badbaadintii kumanaan Soomaali ah oo baahi heysay sanadkii 2011.
Hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta ayaa horay ugu howlgeli jirtay dalka Soomaaliya, xilligaas ma joogin Turkigu, hase ahaatee xagee ku dambeeyeen waxyaabihii hay’adaas dalka ka qaban jirtay?.
Waxaa hay’adaas hoos imaan jiray Iskuulo badan oo ku kala yaallay Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada Koonfureed ee dalka sida Badhabo, inta badan Iskuuladaas waa la kala gatay, halkaa qaar ka mid ah weli beec yihiin oo dalaalo suuqyada wareejinayaan!!!
Iskuulladaas qaarkooda waxaa iibsaday hay’ado ay leeyihiin Xarkada Al-islaax oo ka tirsan Al-akhwanul Muslimiin, kaasoo aan la tusin Imaaraadka, marka sow lagama yaabo in mashaariicda ku daysiga ah ee Imaaraadku halkaas oo kale ku dambeyn doonaan?
Imaaraadku kuma siman mashaariic kaliya, ee waxey dhex galeen nabadsugidda oo qalab iyo gaadiid siiyeen, waxey sidoo kale dhexgaleen ilaada madaxtooyada.
Sida lagu yaqaanay taariikhaha lasoo dhaafay dalkii tababara ciidan ajnabi ah wuxuu ku shubaa waxa uu doonayo, wuxuuna si sahlan ku helaa akhbaarta hoose ee dalka askarta loo tababary.